လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများ - သင်ပိုမိုယားယံလေလေ (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
လိင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သို့မဟုတ် sync libidos မှအိမ်ထောင်ဖက်များအကြားကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကတည်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအရာသည်လိင်အလိုဆန္ဒကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်တူသည်ဟုယူဆနိုင်သည်၊ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကသင့်မှာအိမ်ထောင်ဖက်ထက်ပိုလိုချင်တဲ့စားချင်စိတ်ပိုကြီးလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်သလိုသရေစာထည့်မယ်၊
သူတို့အစားအသောက်အဓိကလုပ်ပေးအဖြစ်လူတော်တော်များများက orgasm ရှုမြင်ကြသည်။ အစာရှောင်ခြင်းအစာကိုတန်ဖိုးရှိသောအဆင်ပြေသည်ဆိုပါကသင်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်တိုက်ကျွေးရရှိသွားတဲ့ကြောင့်ပိုမိုမြန်ဆန်, ဒါမှမဟုတ် neurochemicals တစ်ပိုကြီးပေါက်ကွဲမှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပယ်ရရှိသွားတဲ့သောကွောငျ့, သင့်အကြိုက်ဆုံးစိတ်ကူးယဉ်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းဖို့ပိုရှိနိုငျပါသလော အစားအစာကိုခလုတ်မတရားသောနှင့် Bing အချို့အမျိုးမျိုး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏ဖြစ်ကောင်းအချို့အမျိုးမျိုးလုပ်ပေးသကဲ့သို့လွန်း (ဆိုလိုသည်မှာ, ဘာပဲရရှိသွားတဲ့ သငျသညျ တကယ်) နှိုးဆော်ခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်, sugary အစားအစာများကိုတစ်ဦးအလေ့အထဖြစ်စေလျက်, သင်ကျန်းမာစားစရာဘို့အဘယ်သူမျှမအလိုဆန္ဒရှိချိန်တွင်ပင်ထိုသူတို့အဘို့တောင့်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်, အဲဒီအချိန်မှာတောင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါသည် စားရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်ဟာအာဟာရကိုရှာနေတာမဟုတ်ဘဲမကြာမီထပ်မံကျဆင်းသွားတဲ့ ဦး နှောက်ထဲကဓာတုဗေဒ dopamine ကိုအလျင်အမြန်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်ပြီးသင်ပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်စေပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ၊ သုံးပွင့်ဆိုင်သို့မဟုတ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အကြောင်းသင်ပိုမိုစိတ်ကူးလေလေ၊ မင်းရဲ့အတွင်းပိုင်းရုပ်ရှင်ကိုလိင်စိတ်နိုးထစေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အာရုံကြောဆဲလ်တွေကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ပေးတယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်သင်၏စိတ်ထဲတွင်ပျက်စီးသွားသောစီဒီကဲ့သို့တစ်စုံတစ်ခုကိုဖွင့်နိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သင်၏ dopamine တက် jack အဖြစ် ကတိ အပျော်အပါး၏, အော်ဂဇင်ဘို့မတရားသောဝေးယခင်အခြေခံလိင်စိတ်အထက်မြင့်တက်လာစေနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့တိုးပွားလာစိတ်ပျက်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရှာဖွေကြောင့်အများကြီးပိုခက်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင့်ဦးနှောက်ကိုအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်မှ desensitized ဖြစ်လာပေမည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောသည်
ငါ porn ကးမှကူးယဉျပျော်မွေ့။ ငါသည်ငါ့ခင်ပွန်းနှင့်အတူလိင်ခဲ့သည့်အခါနောက်တဖန်အော်ဂဇင်ခက်ခဲသလိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ယခုမူကား, ငါရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံးကစောင့်ရှောက်လော့။
သင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်အတူသင်မြှင့်တင်ရန်တစ် ဦး တိုက်တွန်းအခြားသူတစ် ဦး နှင့်အတူနက်ရှိုင်းစွာချိတ်ဆက်ရန်သင်၏ကျန်းမာလိုအပ်ချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျယ်လောင်သောအာရုံကြောဓာတုပစ္စည်း“ GOTTA IT GET!” စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာသောအချက်ပြမှုများသည်သင့် ဦး နှောက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ပြားစေနိုင်သည် ဆုလာဘ် circuitryသင့်ရဲ့ဦးစားပေး skew ကတညျး။ သင့်ဦးနှောက်လွှတ်ပေးသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းထက်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်နေစဉ်အတွင်းပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် neurochemicals ၏ဤစရိုက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, သင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအမှန်တကယ်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်တန်ဖိုးထားကြလိမ့်မည်သည့်အခါ အထက် သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်။ ဒါကအတွင်းပဋိပက္ခဖန်တီးနှင့်နွေးထွေးသောချစ်ခင်နှင့် (သုခချမ်းသာကိုတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ကြသည်နှစ်ဦးစလုံးရာ၏) နီးကပ်, ယုံကြည်စိတ်ချရအဖော်၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းသင့်လှည့်ဖြားစေနိုင်သည်။
စိတ်ကူးယဉ်ကျယ်ပြန့်, ဘာပဲသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ယူဆနေသည်။ သို့သျောလညျးပဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏အစားအစာ, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့ဦးနှောက်ဓာတုအဆင့်မှာအရေးပါပုံရသည်။ တယောက်သောသူကသူ့အတွေ့အကြုံ said:
လိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်ပြင်းထန်လွန်းခြင်းကြောင့်ပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ ငါကကြိုးဆွဲချခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးယဉ်ပေါ်မူတည်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်သည်စိတ် ၀ င်စားစရာမကောင်းတော့ပါ။ ထို့နောက်ပိုမိုပြင်းထန်။ လက်တွေ့ဆန်သောညစ်ညမ်းမှုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုသို့ကူးပြောင်းရပါမည်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုပြဌာန်းခြင်းသည်လက်တွေ့တွင်မျှော်လင့်ချက်မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ အပေါ်ပြုမူပါက၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းများစွာသည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ကျန်းမာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အကြိမ်ရေများပြားလာခြင်းနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေပါသလား။ သင်သည်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်ကိုအော်ဂဇင်ပြုသည့်တိုင်ကြာရှည်စွာမပျောက်ကွယ်နိုင်သည့်ပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုများကိုခံစားရပါသလော။ သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်ကြီးစိုးသောဂိမ်းများသို့မဟုတ်အိမ်တွင်ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းများအတွက်သင်၏“ လိုအပ်ချက်များ” နှင့်မကိုက်ညီသောအခါသင်စိတ်ဆိုးသလော။ မင်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကတိုးလာနေလား။ သင်ပိုအထီးကျန်နေလား မင်းစိတ်ပျက်နေသလား၊ မင်းလား အားနည်းစိုက်ထူ? သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်း၏ပြီးပြည့်စုံသောဗီဒီယိုကိုရှာဖွေရန်သင်အဆုံးမသတ်ရှာဖွေနေပါသလား။ (ကြောင်းနှင့်အတူကံကောင်းပါစေ။ )
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာကြုံနေရလျှင်, ပိုပြီးသို့မဟုတ်ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတာ, အော်ဂဇင်အဖြေမဟုတ်ပါ။ အခြားလမ်းကြောင်းမှကျေနပ်မှုရရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အောက်ပါနည်းစနစ်၏ဗားရှင်းသည်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးစေနိုင်သောရောဂါဖြစ်သည့်လူနာများအားသူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကူညီသည်။ OCD ဝေဒနာသည်တစ် ဦး ကသူသည်မီးဖိုကိုအချိန်နှင့်အမျှလုံလောက်စွာမရရှိနိုင်ကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်လျှင်၎င်းသည်လွယ်ကူစွာခံစားရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ သူသည်စစ်ဆေးတိုင်းအချိန်တိုင်းတွင်အကူအညီမဲ့သော ဦး နှောက်ကွင်းဆက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသောကြောင့်သူ၏စိုးရိမ်စိတ်မှာကြီးထွားလာသည်။ သူဟာ loop ကိုသူစတင်အားနည်းလာအောင်စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ် မိမိအတွန်းအားအပေါ်ပြုမူမထားဘူး။ တနည်းအားဖြင့်ပိုငျကလုပျ, ပိုငျကလုပျခငျြ; နည်းသင်ကမနည်းသင်ကလုပ်ပေးချင်တယ်။
သင်၏စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုပိုမိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖြင့်ကုန်အောင်ကြိုးစားမည့်အစားသင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းမှလေကိုထုတ်ပစ်ပါ။ ကြောင်း ဦး နှောက်ကွင်းဆက်လျစ်လျူရှုကနေအားနည်းသွားစေရန်ခွင့်ပြုပါ။ သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းမှအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်အောင်မရပ်ပါနှင့်။ အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ၊ ၎င်းမှဗီဒီယိုများရှာရန် သင့်စိတ်ထဲပေါ်လာတိုင်း "ငြင်းပယ်ပါ!" ဟုမိမိကိုယ်ကိုပြောင်လက်စွာပြောပါ။ သင်၏ ဦး ခေါင်း၌ကျယ်လောင်သောအသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်လှုပ်ရှားနေသည့်မြင်ကွင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ စက်ဝိုင်းကြီးအနီကြီးကိုတံဆိပ်တုံးဖြင့်တိတ်တိတ်လေးဖြင့်တိတ်တဆိတ်တံဆိပ်ခတ်နေသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ထိုခဏခြင်းတွင်တခြားနေရာသင့်ရဲ့အာရုံကိုလှည့်။
သင်အကျွမ်းတဝင်ရှိသော ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ကိုရပ်တန့်လိုက်သည်နှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆဲလ်များ၏ synapses များမှဆက်သွယ်မှုများသည်အမှန်တကယ်အားနည်းသွားပြီးစိတ်ကူးယဉ်က၎င်းအားသေခြင်းချုပ်ငြိမ်းစေသည်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန့်ကျင်ခြင်း, အမည်များကိုမခေါ်, သို့မဟုတ် (သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်!) "ဖျားနာ" သို့မဟုတ် "အပြစ်ရှိတယ်" တံဆိပ်ကပ်ခြင်းမပြုရန်သတိထားပါ။ သင်တိုးတက်နေလားဆန်းစစ်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ ထိုသို့သောနည်းပရိယာယ်များသည်စိုးရိမ်စိတ်ကိုတိုးပွားစေသည်။ (သင်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်နှိုးဆွမှုအကြားဆက်နွယ်မှုရှိပါကသင်စိတ်ဖိစီးမှုခံရတိုင်းအော်ဂဇင်ပြုချင်နေကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။ )
ပထမတော့ဤလုပ်ငန်းစဉ်, စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့ပုံရသည်နှင့်စိတ်ပျက်တိုးပွားစေပါသည်။ သင့်ဦးနှောက် လိုချင်တပ် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် neurochemicals ၎င်း၏ပြင်ဆင်ချက်များနှင့် ဆုတ်ခွာမသက်မသာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဆိုပါ technique ကိုလျှောက်ထားနေချိန်မှာသင်ခံစားမိဘယ်လောက်အတွင်းမငြိမ်မသက်ကြောင့်သင်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်ပါသည် do ကြောင်းမှတ်တော်မူ၏။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုယခုညင်ညင်သာသာသင့်ရဲ့သဘာဝကလိင်စိတ်နိုးထထံမှအားလုံးစိတ်ကူးယဉ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းများရန်ဖြစ်ပါသည်, သင်၏ဦးနှောက်ချိန်ခွင်လျှာဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ဒါဟာသည်းခံခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုယူပေမယ့်ပါလိမ့်မယ် လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်.
သင်၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည်သဘာဝပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါသင်၏ချဉ်းကပ်မှုအသစ်သည်အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုသင်သိလိမ့်မည် စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲ။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ကသူ့ဟာသူလည်ပတ်နေတယ်။ သင်သည်အောက်ပါအချက်နှစ်ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် - (၁) သင်စိတ်ကူးယဉ်ကိုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်နေစဉ်စိတ်ကူးဥာဏ်ရည်လိုအပ်မှုသည်သင်ထင်ထားသည့်ပမာဏထက်များစွာနည်းပြီး၊ (၂) သင့် ဦး နှောက်၏ sensitivity မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှအဖြစ်မှန်သည် ပို၍ ကျေနပ်ဖွယ်ရာရှိသည်။
သူသညျမိမိဆန္ဒဇနီးနှင့်အတူစအိုလိင်ဆက်ဆံပျော်ရွှင်မှုကိုအားမိမိသာလမ်းကြောင်းကိုခဲ့ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချသောကြောင့်နှစ်ပေါင်းမကျေနပ်မှုများနှင့်မကျေနပ်မှုနှင့်အတူ seething ခဲ့သောတယောက်သောသူ, ကအကြောင်းကူးယဉျနှင့်စအို-လိင် porn ထုတ်ရှာကြံတော့ဘူး။ တစ်လပြီးနောက်သူ posted:
ကျွန်မ ပို. ပို. ကျွန်တော့်ဇနီးမှဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသည်ငါ့နာကြည်းခံစားချက်တွေကိုမေ့ကိုရှာဖွေခံစားကြရသည်။ အဆိုပါခိုက်ရန်ငါ၏အစိတ်ကူးယဉ် entertaining, အစားလိင်စဉ်အတွင်းချက်ချင်းအဖြစ်မှန်ပေါ်အာရုံထဲကနေလာသလိုပဲ။
နှစ်ပေါင်းများစွာလိင်သည်စိတ်ကူးယဉ်နှင့်လုံးဝမတူသည့်အချိန်တွင်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်အမျိုးသမီးအားလုံးနီးပါးနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံမှုသည် 'ဒီတစ်ယောက်ကငါ့ကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ... ' ဟူသောကန ဦး တွေးတောမှုကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ထိုစိတ်ကူးကကျွန်ုပ်ကို ၁၀ မိနစ်ကြာကားမောင်းခြင်းအတွင်းမှားယွင်းစေခဲ့သည်။ ငါပြန်လည်ကု။ မရသောနာရီပေါင်းရာနှင့်ချီ။ ကုန်စေခဲ့သည်။
သင်၏လိင်အင်္ဂါကိုခုန်စေသောအတွေးများနှင့်ရုပ်ပုံများသည်သင့် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ကွင်းဆက်ကိုသက်ဝင်စေရန်သင်အမှတ်မထင်ကြိုးတပ်ထားသောကာတွန်းများ၊ သင်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်သောကြောင့်သင်၏ ဦး နှောက်ကထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုမှားယွင်းစွာတန်ဖိုးထားသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ကစိတ်ကူးယဉ်အခြေပြုအခြားအော်ဂဇင်တစ်ခုလိုအပ်ကြောင်း ဆက်၍ အချက်ပြနေသည်။ သို့သော်တာရှည်ခံသောအားဖြင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှိပုံရသည် မျှမျှတတဦးနှောက်ဓာတုဗေဒကုန်ပစ္စည်းအပေါင်းရငျးနှီး (သို့မဟုတ်ဖော်ရွေလူမှုရေးအပြန်အလှန်စာရေး), ထက်အော်ဂဇင်၏ကြိမ်နှုန်း။ ဒါကသင့်ဦးနှောက်ကိုချိန်ခွင်လျှာပြန်ဖြစ်ပါတယ်တခါကြည့်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
အဘယ်အရာကိုထိုအတောအတွင်းအတွက်ကူညီပေးသည်? နေ့စဉ်ကျန်းမာသန်စွမ်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း, ဖော်ရွေလူမှုရေးအဆက်အသွယ်, Bond အပြုအမူတွေ သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုနေ့စဉ်တရားထိုင်, ခုန်, မိတ်ဖက်ယောဂ, သဘောသဘာဝအတွက်အချိန်, မိသားစုနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, သကြားနဲ့ကဖင်းဓာတ်အပေါ်ပြန်ဖြတ်တောက်နဲ့တခြားသုခချမ်းသာအလေ့အကျင့်နှင့်အတူဆော့ကစားသို့မဟုတ်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့အပြန်အလှန်အတူ။
လိင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးပွားစေမည့်သေချာသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ဒေါသတိုးပွားလာပါကသင်မတွေ့ရှိနိုင်သောကျေနပ်မှုကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ပိုပိုပြီးပူလာတဲ့အော်ဂဇင်တွေကခဏခဏသက်သာတာကိုပေးတယ်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၊ orgasms အားလုံးသည်အစားအသောက်များကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ တချို့က Fritos နဲ့ပိုဆင်တူတယ်။
သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်ကိုပြန်ချိန်ခွင်လျှာသို့လာရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီပြီးတာနဲ့, သင်သောရံဖန်ရံခါအော်ဂဇင်-The တစ်စိတ်ကူးယဉ်-လိင်မူးရူးထက်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးယဉ်-အခမဲ့, ကာမဂုဏ်တှေ့ဆုံ-လျှော့ချပေးခဲ့စိတ်ပျက်၏ထုတ်ကုန်ရှာတွေ့လိမ့်မည်။ သင်ပင်ပိုမိုကြိုးစားရန်ဂရုစိုက်စေခြင်းငှါ lovemaking မှအစွန်းရောက်ချဉ်းကပ်.
ဖိုရမ်မှ Guy ၏အစီရင်ခံစာ
ငါစတင်ခဲ့သည် [3 လအကြာ] ဒါဟာတစ် ဦး စီးနင်း၏ငရဲနှင့်ရလဒ်များအရောအနှောရောနှောခဲ့ပေမယ့်အဆုံး၌အားလုံးရကျိုးနပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါငါ့အစီရင်ခံစာပါ
ငါတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူးဆုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ED ကိုတွေ့ကြုံပြီးတဲ့အခါဒီလိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကတည်းကသူဟာကျွန်တော့်ကိုလာခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့အကြိမ်အနည်းငယ်ထွက်သွား။ အိပ်ရာအတွက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒါသိပ်မကောင်းဘူး ကျွန်မတို့အရက်မူးနေကြတယ်၊ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာသူမနောက်တစ်ခေါက်သွားချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အပြောင်းအလဲအတွက်အချိန်ကောင်းပဲဆိုတာငါသိတယ်။
porn ဆိုတာတကယ်တော့ငါ့အတွက်မရှိခဲ့ဘူး။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေနဲ့တစ်နေ့ကို ၁-၂ ကြိမ်လောက်လုပ်တတ်တယ်။ ငါအတန်းကျောင်းတက်ကတည်းကဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါ့မှာကောင်မလေးတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေ (ဥပမာကောလိပ်လို) ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ငါချထားတော့ငါမရပ်နိုင်တော့ဘူး။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်လိင်ကိုတကယ်မလိုအပ်ဘဲခံစားခဲ့ရရုံသာရှိသေးသည်။
ပထမဦးဆုံးအရက်အနည်းငယ်ငါ့အဘို့အခက်ခဲဆုံးမဟုတ်ပါခဲ့ကြသည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အလွယ်ကူဆုံးခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်ချိန်တတိယအပတ်ကပတ်လည်ငါသည်ငါ့အစပျိုးခြင်းကြုံနေရစတင်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏စိတ်ကူးယဉ်စိတ်ကိုမှလာလိမ့်မယ်, ငါ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုအော်ဂဇင်ဘို့တောင်းပန်လိမ့်မယ်။ ဒီငါရှိခဲ့အရာအားလုံးယူ Fighting ။ တိုင်းစက္ကန့်အနည်းငယ်, ငါသည်ငါ၏အကြံအစည် redirect ခဲ့ရသည်။ ဒါဟာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့ပေမယ့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
စတုတ္ထအပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲတချို့ကိုသတိပြုမိလာတယ်။ ကျွန်မရဲ့လိင်တံဟာပိုကြီးလာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသေချာဘူး ၎င်းသည်အသားအရေပြည့်ဝမှု၊ ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအင်အဆင့်များသည်ယခင်ကထက်ပိုကောင်းပါသည်။ ငါသေချာပေါက်နံရံတွေကနေခုန်ထွက်မသွားဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကဒီပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိတယ်၊ ကျောင်း၊
ငါခက်ခဲ mode ကိုပေါ်မှာဤအမှုကိုပြုပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲဤနေရာတွင်ထိုမိန်းကလေးစုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူန်းကျင်အရူးလုပ်ပေမယ့်ငါမဆို orgasm မရှိခဲ့ဘူး။
ယေဘုယျအားဖြင့်, ငါသည်ဤခရီးကျိန်းသေကျိုးနပ်ခဲ့သည်ဟုပြောချင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောလိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများသည်ယခင်ကမှမှုန်ဝါးသောပုံရိပ်များသာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အပေါ်လုံးဝသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ငါရက်ပေါင်း ၉၀ ပြီးနောက် fapping ပြန်သွားနိုင်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုပြောခဲ့သည်၊ သို့သော်သင်ကဘာလဲဆိုတာငါသိ၏၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်ဟုမခံစားရပါ။ ငါနောက်တဖန် fapping စတင်လျှင်ငါပဲသံသရာပြန်ကျလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ ငါ fap လုပ်ဖို့မလိုအပ်တော့ဘူး ငါသာဆက်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ငါ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်အတူရှေ့ဆက်ဆက်လက်စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်၏အဓိကအစပျိုးချက်တစ်ခုမှာဤအငြိုးကြီးသည့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများဖြစ်သည်၊ အချို့သည်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာကြာလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အိပ်ပျော်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်နှင့်အခြားသူများမကြာခဏရှည်လျားသောအသေးစိတ်စိတ်ကူးယဉ်မှုများပါ ၀ င်သော“ ပျင်းရိ” သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝကိုလွင့်မျောနေသော Fapping သို့ ဦး တည်သွားခဲသည်။
ငါ ၆၂ ရက်နေ့ရောက်ပြီ။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အခုစိတ်ကူးယဉ်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ ဒါကငါ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့အာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုလား၊
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်“ သူငယ်ချင်းဟောင်း” ကိုကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများနှင့်အတူလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီးမည်သူမျှသဲလွန်စကိုမလွှတ်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် reboot လုပ်တဲ့အစောပိုင်းအဆင့်မှာကျွန်တော်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသိပေမယ့်အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့“ ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာ” ကိုသွားနေတုန်းပါ။ ဒါပေမယ့်ငါ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့လို့လာလည်ပတ်တာကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ခဲယဉ်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။
ဒါကြောင့်ဒီမှာ Melancholie တစ်နည်းနည်းရှိသေး၏, ဒါပေမယ့်ငါယခုသူတို့သည်ငါ၏ဦးနှောက် (နောက်ဆုံးတော့) အနာရောဂါငြိမ်းစရာကြောင်းကိုနွမ်းကြောင့်ကြောင်းကိုသတိပွုမိပါပွီ။
ငါကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုကိုမျှဝေချင်တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်စိတ်ကူးယဉ်မှုများနှင့်ထပ်တူပြproblemsနာမျိုးရှိပါကခဏကြာပေမည်၊ သို့သော်သင်သည်၎င်းတို့ကို“ အစာကျွေးခြင်း” ကိုမဆက်လုပ်သရွေ့သူတို့သည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးသေသွားနိုင်သည်။